Published April 14, 2021 at 9:31 PM CDT
Xarunta Crittenton ee ku taal magaalada Sioux City waxay xireysaa hoyga gurmadka degdegga ah. Agaasimuhu wuxuu leeyahay arrimaha la xiriira COVID-19 ayaa door weyn ka qaatay go’aankaas. Hay’ada ayaa joojisay adeegyadii hoyga horaantii bishaan. Agaasimaha guud ee xarunta ayaa ku sheegay war-saxaafadeed uu maanta soo saaray in maqnaanshaha shaqaalaha ee la xiriira COVID iyo hoos u dhaca codsadayaasha cusub ay caqabad ku tahay socodsiinta xarunta. Leslie Heying waxay sheegaysaa in masiibada sidoo kale ay saameyn ku yeelatay hanaanka shaqaalaynta hay’ada, waxaana aad u yaraaday codsadayaasha cusub. Hoyga degdegga ah waxaa laga furay dabayaaqadii 1970-meeyadii 3901 Green Ave. Sannadkii 2020-kii, 180 carruur ah ayaa lagu daryeelay hoyga. Sioux City Journal ayaa ku warramaysa in guddoomiyaha guddiga agaasimayaasha Xarunta Crittenton Center uu sheegay inay la kaashan doonaan la-hawlgalayaasha bulshada si loo ogaado meelaha ay u baahan yihiin iyo sida ay hay'addu dib ugu fikiri karto xarunteeda hoyga si ay si wanaagsan ugu buuxiso baahiyahaas.
Sioux City Journal ayaa ku warramaysa in guddoomiyaha guddiga agaasimayaasha Xarunta Crittenton Center uu sheegay inay la kaashan doonaan la-hawlgalayaasha bulshada si loo ogaado meelaha ay u baahan yihiin iyo sida ay hay'addu dib ugu fikiri karto xarunteeda hoyga si ay si wanaagsan ugu buuxiso baahiyahaas. Shirkeedii toddobaadlaha ahaa ee toddobaadlaha ahaa ee maanta, barasaabka Iowa Kim Reynolds ayaa ku kaxeystay gurigeeda taageeradeeda loogu talagalay tallaalka coronavirus. Taasi waa maalin kadib markii saraakiisha caafimaadku ay kula taliyeen in la joojiyo maamulka tallaalka Johnson & Johnson sababo la xiriira suurtagalnimada waxyeellooyin naadir ah. Reynolds waxay si cad u heshay tallaalka Johnson iyo Johnson bishii 3-dii Maarso Waxay sheegtay inaysan ka qoomameynin. Gudoomiyaha ayaa sheegay in talaalku uu yahay difaaca ugu fiican ee laga hortagi karo viruska, abaalmarintuna ay aad uga badan tahay halista. Reynolds ayaa sheegay in ku dhawaaqista federaalka ee hakadka ku yimid maamulka ay timid Talaadadii iyadoo aan horay loo ogeysiin gobolada. Waxay sheegtay Iowa inay sii waddo inay wax ka beddel ku sameyso qoondaynta tallaalka. Laakiin waxay sheegtay inay rajaynayso saameynta joojinta tallaalka Johnson & Johnson ay noqon doonto "mid la maareyn karo" sababo la xiriira tirada sii kordheysa ee tallaallada Pfizer iyo Moderna ee gobolku helayo.
Saraakiisha caafimaadka dhammaan saddexda Siouxland waxay si kumeelgaar ah u joojiyeen isticmaalka tallaalka Johnson iyo Johnson, ka dib talooyinka CDC…